စမတ် Speakers: တစ်ဦးကဝယ်သူလမ်းညွှန် - သတင်း Rule
စမတ် Speakers: တစ်ဦးကဝယ်သူလမ်းညွှန်
သူတို့ကသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတီးလုံးကစားရာမှမီးဖွင့်ဖို့အရာအားလုံးလုပျနိုငျ. ဒါပေမယ့်အရာသငျသညျအရပျသငျ့? ကျနော်တို့လေးယောက်ကိုဦးဆောင်မော်ဒယ်များစမ်းသပ်ရန်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “စမတ်စပီကာ: တစ်ဦးဝယ်မယ့်လမ်းညွှန်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, တနင်္ဂနွေ 25 ဖေဖော်ဝါရီလအပေါ် Observer များအတွက် 2018 09.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
စျေးနှုန်း: £ 89,99Amazon ရဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်: Echo အတွက်စမတ်စပီ၏တပြင်လုံးကိုအမျိုးအစားကိုတီထွင်သောစက်ကိုတစ်ပြုပြင်မွမ်းမံဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် 2014. အသစ်: Echo သေးငယ်, ပိုကောင်းတဲ့အသံနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရှာဖွေနေ, ထည်သို့မဟုတ်သစ်သားချောတစ်ဦးရွေးချယ်မှုအတွက်.
အဘယ်အရာ: Echo ကြီးမြတ်စေသည် Amazon ရဲ့ကို virtual လက်ထောက်ဖြစ်ပါသည်, Alexa. ထိပ်၌ခုနစ်မိုက်ခရိုဖုန်း၏တစ်ဦးကလက်စွပ်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအဘို့အထွက်နားထောငျတ စကားလုံးနိုး - ကို default ရိုးရှင်းစွာ "Alexa" ဖြစ်ပါတယ် - အနက်အဘို့အမေဇုံရဲ့ဆာဗာကိုသင်အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုပေးပို့ခြင်းမပြုမီ. Alexa နီးပါးအမြဲသင်တစ်ဦး extractor ပန်ကာအဖြစ်အသံကျယ်ဂီတဆူညံသံကျော်နှင့်တော်တော်ဝေးကနေအပါအဝင်ကွားနိုငျ.
Alexa Multi-user ကထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, မေးခွန်းတွေကအတော်လေးတွေအများကြီးဖြေကြားနိုင်ပါတယ်, သငျသညျဆိုသညျကားအဘယျသို့ပြန်ဆိုမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထဲသို့ပလပ်နိုင် built-in အခွက်နှင့် Third-party ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ရှိပါတယ်, ကရရှိနိုင်ပါအရှိဆုံး rounded စကားသံကိုလက်ထောက်အောင်. ဒါဟာအထူးသဖြင့်စမတ်နေအိမ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သီချင်းဖွင့်မှာမီနိုင်တဲ့, Spotify ကျော်အပြည့်အဝစကားသံကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, အမေဇုံဂီတနှင့် TuneIn.
အသစ်: Echo လည်းဟောင်းတဦးတည်းထက်ပိုကောင်းတဲ့အသံ, ပိုပြီးဘေ့နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူ, အထူးသဖြင့်ပိုမိုမြင့်မား volumes ကိုမှာ. ကစည်းအတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်, ဒါဟာဆက်ဆက်စျေးနှုန်း၎င်း၏အလေးချိန်အထက်တွင် punches, ယင်း၏တစ်ခုတည်း 2.5in woofer ကနေ 360 ဒီဂရီအသံနှင့်တစ်ဦး 0.6in tweeter နှင့်အတူအခန်းကိုဖြည့်နိုင်. ဒါဟာပင်: Echo မှသို့မဟုတ်စပီကာများနှင့်အ streaming ဂီတချိတ်ဆက်မှုအတွက်အသံထွက်ဆိပ်ကမ်းနှင့်ဘလူးတုသ်ရှိပါတယ်.
Amazon ရဲ့ Alexa app ကိုအလွန်နိုင်စွမ်း, အနည်းငယ်နှေးကွေးလျှင်, ကတက် setting အောင်နှင့်လွယ်ကူသောအမှုအရာပြောင်းလဲနေတဲ့. volume အတှကျထိပ်ပေါ်မှာခလုတ်, လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခလုတ်ကိုနှင့်တစ်ဦးစကားအခလုတ်ကို Alexa လုပ်နေတာအဘယ်မှာရှိသနည်း: Echo သည်သင်တို့ထံကစကားပြောနေတာထင်နေသည်သင်သည်အဘယ်သို့ပြထိပ်ပတ်လည်အလင်းလက်စွပ်အားဖြင့်ပြည့်စုံနေကြတယ်. အဆိုပါ MICS အသံတိတ်နှင့်လက်စွပ်ကိုအနီရောင် glows, အခန်းအနှံ့ကနေကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူရာဖြစ်ပါသည်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: £ 90 မှာ, အဆိုပါ: Echo ရိုက်နှက်ရန်ခက်ခဲပါကဖွင့်, Alexa ကအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကို All-ပတ်ပတ်လည်မတ်စပီအောင်နှင့်အတူ.
အဆိုပါ Apple က HomePod: အထင်ကြီးစရာအသံအရည်အသွေး. ဓါတ်ပုံ: အန်တိုနီယို Olmos
စျေးနှုန်း: £ 319 အဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ် entry ကို Apple ရဲ့ HomePod ဖြစ်ပါတယ်, က, အိုင်ဖုန်း-ထုတ်လုပ်သူနောက်ဆုံးတော့ပထမဦးဆုံး: Echo စျေးကွက် hit ထက်ပိုသုံးနှစ်လွန်ပြီးမှပါတီပူးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ HomePod အုပ်စုအတွက်အကြီးမားဆုံးနှင့်စျေးအကြီးဆုံးမတ်စပီဖြစ်ပါတယ်, ပြားချပ်ချပ်ဆီလီကွန်အောက်ခြေနှင့်ရတဲ့အရာတွေနှင့်အတူတစ်ကွက်ဖုံးဆလင်ဒါ, ထိပ်ပေါ်မှာ touch-sensitive disc ကို.
ကြီးမားသောဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, ကစည်း၏အရှိဆုံး unassuming ရဲ့က mantelpiece သို့မဟုတ်စာအုပ်စင်ပေါ်မှာဖြစ်သကဲ့သို့မီးဖိုချောင်စားပွဲပေါ်မှာအလယ်၌အိမ်မှာကဲ့သို့ဖြစ်၏. သတိပေးခဲ့သည်ခြင်းကိုခံရ, သော်လည်း: အဆိုပါဆီလီကွန်ခြေလျင်ကုသသစ်သားပေါ်အဖြူလက်စွပ်အမှတ်အသားများချန်ထားမည်. ထိပ်နှစ်ခုလြှို့ဝှကျ volume ခလုတ်အခါပြသတဲ့စင်တာ multicolour display ကိုရှိပါတယ် Siri, Apple ရဲ့စကားသံကိုလက်ထောက်, သငျသညျကိုနားထောင်နေသည်. ဒါဟာအခန်းထဲအနှံ့ကနေသင်မိုက်ခရိုဖုန်းအသံပိတ်နိုင်ပါတယ်စဉ်ကြည့်ရှုရန်အလွယ်ကူဆုံးမဟုတ်ဘူး, အဆိုပါ HomePod ဆိုပိုပြီးနားမထောငျကြောင်းဘယ်သူမျှမမြင်နိုင်အရိပ်အယောင်ရှိရဲ့.
အဆိုပါ HomePod အဆိုပါစည်းအတွက်ပွဲတစ်ပွဲအကောင်းဆုံးအသံပီဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်တစ်ခုတည်းပီကနေရှာတွေ့ဖွယ်ရှိနေအရှိဆုံးကျယ်ပြန် soundscape ဖန်တီးခုနစ် tweeters နှင့်တစ် woofer တွေရဲ့ array ရှိပါတယ်. ဒါဟာအလိုအလြောကျယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ရန်ညှိ, တစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာအတှေ့အကွုံကအခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်နေရာရဲ့ဘယ်မှာနေပါစေကို, နက်ရှိုင်းပေမယ့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားဘေ့နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခွဲခြာနှင့်အတူ, ဘာမျှမပျောက်ရရှိအဓိပ္ပာယ်, ပင်စမြည်ဟီးရိုက်ခတ်.
ဒါဟာကောင်းသောအသံနေစဉ်, Apple ရဲ့ Siri ကိုဖွင့်ဖွင့် Google ရဲ့လက်ထောက်သို့မဟုတ် Amazon ရဲ့ Alexa ကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်အတန်းမှမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာသင်အဖြစ်သူတို့ထဲကအကောင်းဆုံးကိုကွားနိုငျ, သို့သော်သင်နားလည်သဘောပေါက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကိစ္စဖြစ်ပါသည်. Siri ကိုသင်တို့ပတ်လည်ပြောကြိုးစားနေသောအရာကိုရရှိသွားတဲ့ 70% ထိုအချိန်ကာလ၏, အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည့်, မေးခွန်းများကိုဖြေကြားခြင်းနှင့်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်နည်းတူမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏စဉ်. အဘယ်သူမျှမ Multi-user account ကိုထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, ဖြစ်စေ, အရာကတစ်မိသားစုအိမ်မှာအတူအပေါ်ရဖို့လျော့နည်းလွယ်ကူဆိုလိုတယ်.
အဆိုပါ HomePod သာ Apple က Music ကိုသို့မဟုတ် iTunes Match ထောက်ခံပါတယ်, Beats ကျော်လွန်ခြင်းမရှိဇာတိ Spotify သို့မဟုတ်ပင်ရေဒီယိုအဓိပ်ပာယျ 1. ဂီတတစ်ခုက iOS device မှ AirPlay ကနေတစ်ဆင့်ကပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း, တစ်ဦးကို PC ပေါ်မှာ mac သို့မဟုတ် iTunes, ဒါပေမယ့် Android ထုတ်ကုန်ထွက်ဖြစ်ကြသည်နှင့်မျှမကဘလူးတုသ်သို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုလိုင်း-in ကိုအဲဒီမှာဖွင့်. တစ်ဦးကခေတ်သစ်ကို iOS device ကိုလည်း HomePod ထူထောင်ရန်လိုအပ်, ကသာ All-Apple ကအသုံးပြုသူများအတွက်ရဲ့အဓိပ်ပာယျ.
ဆုံးဖြတ်ချက်: ဒါဟာအကြီးအသံပေမယ့် Siri ကို, ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဂီတဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှုနည်းလမ်းယှဉ်ပြိုင်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိပါတယ်.
Google ပင်မ: '' လက်ထောက်သင်မေးရန်ကြိုးစားနေသောအရာကိုထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, ဘယ်မှာအခြားသူတွေပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ '' ဓါတ်ပုံ: အန်တိုနီယို Olmos
စျေးနှုန်း: £ 129 Google ရဲ့နေအိမ်စမတ်စပီကာဟာသေးငယ်, တခြားသူတွေအများစုထက် chubbier device ကို. အစား: Echo ဒါမှမဟုတ် HomePod ကဲ့သို့ဆလင်ဒါဖြစ်ခြင်း၏, ပြည်ထဲရေးအဖြူရောင်နဲ့ပန်းအိုးတူ, ပျော့-touch, ပလပ်စတစ်ထိပ်ဖျားနဲ့ထည်အခြေစိုက်စခန်းအဖြူ (တစ်ခုတည်းပီနှစ်ခု passive ဓါတ်ရောင်ခြည်ပုန်း).
ထိပ် panel က၏မြေတပြင်လုံး touch-sensitive ဖြစ်ပါတယ်. Google ကလက်ထောက်ကိုသက်ဝင်နှင့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းညှိဖို့မြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှု၌သင်တို့၏လက်ညှိုးကိုပွတ်ဆွဲရန်ဗဟိုကိုထိပုတ်ပါ. နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးကခလုတ်ကိုမိုက်ခရိုဖုန်း mutes. ထိပ်မျက်နှာပြင်အောက် Hidden အယ်လ်အီးဒီတစ်လက်စွပ်ဖြစ်ပါသည်, အပေါ်သွားရဲ့အဘယ်အရာကိုသင်ပြမှတက်ပွင့်လင်းသည့်, အဆိုပါ MICS ကျောခိုင်းထားသောအခါလက်ထောက်တုံ့ပြန်သို့မဟုတ်အဝါရောင်တက်မီးအခါစက်ဝိုင်းပုံစံအောင်.
Google ပင်မတော်တော်လေးကောင်းစွာသင်နားမထောင်ဖို့လက်ထောက်ကို enable ပြုလုပ်ထိပ်၌နှစျခု MICS ရှိပါတယ်, အများဆုံးဆူညံသံများနှင့်ဂီတကျော်, ဒါပေမယ့်မရအတော်လေးအဖြစ်: Echo. လက်ထောက်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးသဘာဝဘာသာစကားအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အတူအမေဇုံရဲ့ Alexa မှကျွမ်းကျင်မှုအလားတူအစုံရှိပါတယ် - သင်ရှုပ်ထွေးတက်သင်၏မေးခွန်းပါလျှင်, လက်ထောက်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်မေးရန်ကြိုးစားနေသောအရာကိုထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, ဘယ်မှာအခြားသူတွေကျရှုံး. ဒါဟာအစ Multi-user ကထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအသံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကလွယ်ကူသင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကနေသင့်ရဲ့စာကြည့်တိုက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ထံမှဂီတရဖို့အောင်.
လက်ထောက်အကြီးမားဆုံးသတင်းအချက်အလက်ဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်, ယေဘုယျအသိပညာမှာကြွင်းသောအရာထက် သာ. ကောင်း၏အောင်, နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဝဘ်မှပြန်ကျသွား, သို့သော်၎င်း၏ Third-party apps များနှင့်စမတ်နေအိမ်ထိန်းချုပ်မှု Alexa နောက်ကွယ်မှအနည်းငယ်အဲလိုဘဲ.
ပြည်ထဲရေးကနေအသံ: Echo ထက်မဟုတ်ဘဲပိုပြီးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါသည်, အိမ်ရှေ့ထွက်ပစ်ခတ်. ဒါဟာဘေ့စတစ်အတော်လေးကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏရှိပြီးသေးငယ်တဲ့စပီကာအဘို့တော်တော်လေးကျယ်လောင်ရနိုင်, ဒါပေမယ့်: Echo ထက်လျော့နည်းရှင်းပါတယ်. အဘယ်သူမျှမကဘလူးတုသ်ထွက်သို့မဟုတ် analogue socket ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘာသာစကားဂီတ Play သို့မဟုတ်ဘလူးတုသ်သို့မဟုတ် Google Cast ကိုမှတဆင့်ဂီတကိုလက်ခံရရှိ Spotify သို့မဟုတ် Google ကနေသီချင်းဖွင့်နိုင်ပါတယ်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: Google ကလက်ထောက်ရဲ့နားလည်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုမတူနိုင်တဲ့ကားမူလစာမျက်နှာအဆိုပါ: Echo ထက်ပိုစျေးကြီးသည်.
အဆိုပါ Sonos တစ်ခုမှာ: ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ရရှိနိုင်နီးပါးတိုင်းဂီတဝန်ဆောင်မှုအပေါ် Alexa. ဓါတ်ပုံ: အန်တိုနီယို Olmos
စျေးနှုန်း: £ 199 အဆိုပါ Sonos တစ်ခုမှာအားလုံးအရောင်းအများ၏ပေါက်ဖြစ်ကတိပြု. Sonos ကြီးစွာသောယူ ကစား:1 စာအုပ်စင်စပီကာ, အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အဖွင့်ခလုတ်နဲ့ touch-sensitive ထိပ်တန်းကဆက်ပြောသည်နှင့်ထိပ်၌တစ်ဦးခြောက်မိုက်ကရိုဖုန်းခင်းကျင်းများအတွက်တွင်းနှင့်အတူက perforated. ဒီအတိုင်းတော့, တနေတဲ့စာအုပ်စင်ပေါ်မှာအိမ်မှာပိုပြီးသို့မဟုတ်တစ်စားပွဲ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ထက်ဆင်တူသည်, ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသော woofer နှင့် tweeter မျက်နှာအဖြစ်က forward ထက်အားလုံးလမ်းညွန်အတွက်အသံကထုတ်လုပ်တဲ့.
ဒီအုပ်စုထဲမှာအခြားပီမဆိုမတူဘဲ, တတစ်ဦးထက်ပိုသောစကားသံလက်ထောက်ကိုထောကျပံ့ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်. အခုပဲ, ဒါဟာအမေဇုန်ရဲ့ Alexa နှင့်တကွကြွလာ, ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီလည်း Google မှလက်ထောက်ပေါင်းစည်းမှုအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်.
ဒါဟာကောင်းစွာသင်နားမထောင်ခြင်းနှင့်ထိပ်၌နှစ်ဦးကိုအယ်လ်အီးဒီရှိပြီးနိုင်ပါတယ်. Alexa အလုပ်လုပ်ကိုင်သောအခါတ MICS အပေါ်ရှိမရှိဆိုတာကိုပြသခြင်းနှင့်အခြားတောက်. ကြွင်းသောအရာနှင့်မတူဘဲ, Alexa အပြီးတွင်စကားလုံးကြားသည့်အခါတစ်ဦးလည်းတစ်ဦး Beep စေသည်, လွယ်ကူကနားထောင်ခြင်းရဲ့အခန်းကိုဖြတ်ပြီးကနေပြောပြရန်အောင်. ၏ The One Alexa ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအများစုထောက်ခံပါသည်, လူအပေါင်းတို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုအပါအဝင်, စမတ်နေအိမ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လက်ထောက် features တွေ, Spotify ၏ပေါင်းအပြည့်အဝစကားသံကိုထိန်းချုပ်မှု, အမေဇုံဂီတနှင့် TuneIn, ဒါပေမဲ့အသံဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုနှင့် ebook ပြန်ဖွင်ကင်းမဲ့.
ဒါ့အပြင်ကြွင်းသောအရာနှင့်မတူဘဲ, တ Alexa မရှိဘဲ wifi စပီကာအဖြစ် operating ၏အပြည့်အဝနိုင်စွမ်း. အဆိုပါ Sonos app ကိုနေရောင်အောက်တွင်နီးပါးတိုင်းဂီတဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစပ်ပြီး, Apple ကဂီတအပါအဝင်, တဦးတည်းရှာဖွေရာအရပ်သို့, သို့မဟုတ်သင်ဂီတကစားရန် Spotify Connect ကိုအသုံးပွုနိုငျ. အဘယ်သူမျှမကဘလူးတုသ်သို့မဟုတ် analogue အသံထောက်ခံမှုရှိပါတယ်, သော်လည်း. သငျသညျကိုလညျး app ထဲမှာသင့်ရဲ့အကြိုက်မှအသံ tweaks နှင့် Sonos အခန်းများအတွက်အသံပိုကောင်းအောင်တစ်ဦးက iOS device ကို အသုံးပြု. Trueplay tuning ခေါ်ဆိုဘယ်သို့ပြုနိုင်.
၏ The One တစ်ဦးချင်းစပီကာအဖြစ်အကြီးအသံ, ဒါပေမယ့်စတီရီယို pair တစုံအတွက်ကိုတောင်ပိုကောင်းအသံ, နှင့် Multi-အခန်းထဲမှာအသံများအတွက်အဟောင်းတွေ Sonos ပီ၏တစုံတယောက်သောသူသည်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေနိုင်ပါသည်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: Alexa နှင့်အတူဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့-အသံစပီကာရိုက်နှက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ combo ဖြစ်ပါသည်.
29407	10 Alexa, အိမ်မှာ google, ခရီးဆောင်, စမတ်စပီကာ, စမတ်စပီကာ
← Buy မှ Apple က HomePod နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရရှိနိုင် Samsung ရဲ့ Galaxy S9 + ဆန်းစစ်ခြင်း →